Fihla ezona zaziso ze-Android zicaphukisayo ngeTinyPanel | I-Androidsis
Ungazifihla njani izaziso ezicaphukisayo kwibar yomgangatho ngeTidyPanel
I-TidyPanel yinkqubo entsha ekuvumela ukuba ufihle izaziso Iyakukhathaza kwaye inokuba nzima kancinci ekuhambeni kwexesha. Zonke ezo zaziso zifana "neWhatsApp yeWebhu iyasebenza" okanye "Ukutshaja okusebenzayo kwe-USB" kungasuswa kwingcambu yaloo ndawo esihlala sisiya kuyo ngokuqinisekileyo.
Insiza evela kubavelisi beXDA nge injongo yokuphucula amava omsebenzisi ukuba siyifumana yonke imihla ngeselula yethu kwaye iphucule kakhulu kwi-Android iminyaka embalwa ngoku. Kodwa, njengesiqhelo, yonke into ingaphuculwa, iTidyPanel isiza isinceda.
1 Inkqubo yasimahla enenguqulo yepremiyamu
2 Ungazifihla njani ezona zaziso zicaphukisayo kwi-Android
Inkqubo yasimahla enenguqulo yepremiyamu
Kwaye nangona Android Pie, xa sisazi uluhlu lweetheminali eziya kuyifumana, iqalile cebisa ngokufihla izaziso kwi-app Ukuba sisuse ngokuphindaphindiweyo kwibar yesaziso, zihlala zikhona izaziso, zinzima kakhulu, ezingenakususwa kwimbono yethu nangesimbo somzimba. Abo bahlali bakwindawo yemeko yokusixelela ukuba sineWebhusayithi kaWhatsApp evulekileyo ngomnye wabo, nangona inyani kukuba sinokwazi ukuba sinomjelo wonxibelelwano osebenzayo kwikhompyuter yethu.
Ngenxa yoku, iTidyPanel ifikile, a app esungulwe lilungu laXDA Developers kubizwa imvuyeyel. Kwaye yile app siyakwazi ukufihla izaziso ezininzi kubandakanya ezi sele zikhankanyiwe kunye nezinye ezimbalwa. Masithi sinamandla okufihla nantoni na esiyifunayo kwindawo yesaziso. Ngokufanelekileyo kuza kuluncedo ukuphelisa loo miyalezo inzima, nangona sinakho ukwenza njalo ngazo zonke izaziso.
Xa sele nditshilo, I-TidyPanel inenguqulo yasimahla esivumela kuphela ukufihla isaziso. Ngelixa uguqulelo lweprimiyamu lusinika inkululeko yokufihla uninzi njengoko sifuna.
Zezi Iimpawu zasimahla zeTidyPanel:
Uluhlu lwezaziso ezisebenzayo nezifihliweyo zokwenza ngokwezifiso ngokulula.
Ubuncinci besayizi ye-APK ngokusetyenziswa kwememori encinci kunye nokusetyenziswa kwebhetri.
Ngaphandle kweentengiso. Idatha igcinwe apha ekhaya.
Iimpawu Iprimiyamu yeTidyPanel:
Fihla a inani elingenamkhawulo lezaziso.
Ukulungiselela ngakumbi ibhetri kunye ne-RAM:
Vimba izaziso kwaye ulibale ngazo.
Ungazifihla njani ezona zaziso zicaphukisayo kwi-Android
Uhlelo lokusebenza lulula kakhulu ukusebenzisa kwaye kuxhomekeke kwiscreen esikhulu apho sinokulawula zonke izaziso ezivela kwipaneli yesaziso. Oko kukuthi, sinemifanekiso yazo zonke izaziso ezivela ukuze sikwazi ukucofa nakweziphi na kwaye uthotho lwezinto onokuluvula luvula.
Eyokuqala yile faka iTidyPanel:
I-TidyPanel (Izaziso zeBlocker kunye necocekileyo)
Umthuthukisi: UDharma Poudel
Kuya kufuneka sivumele iTidyPanel ukuba ifikelele kwizaziso.
Sikhetha iTidyPanel kuluhlu "lokufikelela kwizaziso".
Siphindela emva sibuyele kwi-app.
Sikhetha naziphi na izaziso ezivela ngokunqakraza kwenye.
A iwindow pop-up esicela ukuba singene kwisicatshulwa esinokuthi sikwenze ngokobuqu.
Sikwanokukhetha ukufihla izaziso "ngomzimba" okanye "ngesihloko".
Nje ukuba kwenziwe oku, isaziso siya kuvela kwicandelo lakho.
Sisoloko sinefayile ye- ukubuyela kwimeko yesiqhelo kwizaziso ezinje:
Cofa nakweziphi na izaziso esizifihlileyo.
Iya kuvela umyalezo ozivelelayo esixelela ukuba ukuba sifuna ukuyisusa kweli candelo.
Ukuba ibiyisaziso senkqubo, kuya kufuneka siphinde siyiqale kabusha isixhobo olo hlobo lwezaziso ukuze sisebenze kwakhona.
Si ilungiselelwe ngokugqibeleleyo iTidyPanel Ukuze ifihle ezo zaziso zinzima zihlala zibonwa yonke imihla kwipaneli yokwazisa yeselfowuni kwaye ethintela amava okuya kubona imiyalezo, ii-imeyile nayo yonke into enomdla kuthi kule ndawo ikhethekileyo yeselfowuni.
Ke sele uyazi Ungazifihla njani ezona zaziso zicaphukisayo kwisixhobo sakho se-Android kunye neTidyPanel. Insiza yasimahla, nangona inenguqulo yayo. Ngendlela, ukuba uneGlass, sele uyithatha ekukhetheni ukuphucula ukhetho lwezandi kunye noMncedisi weSandi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ungazifihla njani izaziso ezicaphukisayo kwibar yomgangatho ngeTidyPanel
I-Nexus 6P kunye ne-Nexus 5X zifumana uhlaziyo lwazo lwamva nje